Podium: Na-anakọta ma Jikwaa Nyocha na Otu Central Platform | Martech Zone
N’oge na-adịbeghị anya, m na-agụ ọkwa sitere na Joel Comm banyere ụlọ ọrụ na-akpụ akpụ Fine Line Relocation Movers. Ọ bụ akụkọ na-agwụ ike nke ụlọ ọrụ nke jupụtara na nri idaba na usoro ịgbanwee. M ozugbo jidere jidere site mover na-agaghị ebutu m na arịa ụlọ mgbe a mba aga ruo mgbe m kwụrụ ha ego maka ịgbago elu steepụ nke abụọ. Flightgbọ elu nke abụọ, n'ụzọ, bụ otu steepụ karịa ihe nkwekọrịta ha kọwara. Ọ bụ ihe na-ewe iwe.
Ndị na-eme njem na-eji ọkụ egwu egwu. Mgbe ha mechara nyocha, Joel kwuru na ha nwere aha ọjọọ n'ịntanetị. O doro anya na ha na-efunahụ ọtụtụ ndị ahịa nwere ike ịnweta site na iji usoro azụmaahịa adịghị mma na ịghara ileba aha ha anya. Ọ bụ ihe ijuanya na ha ka na-azụ ahịa.
Ndị na-ebugharị n'elu nwere ike ọ gaghị eche banyere ya, mana imirikiti ụlọ ọrụ na-aghọta mmebi nke posts dị ka nke Joel nwere ike ịnweta na ego ha na-enweta. Podium bụ ikpo okwu emere maka ụlọ ọrụ ndị na-elekọta. N'ime ndị na-enye ọrụ 30,000 na ụlọ ahịa na-eji Podium eme ihe ka ọ bụghị naanị nyochaa ha aha online, kamakwa iji nwaa iwepụta nyocha dị mma.
Ikpo okwu na-enyocha ihe karịrị 20 saịtị nyocha dị iche iche, na-agbakwunye ihe nchọta ahụ, ma na-eme ka ụlọ ọrụ na-eme ka a mata mgbe a na-ebipụta nyocha. Maka azụmahịa ndị na-elekọta, nke a nwere ike ime ka ha nwee ike ịzaghachi ma meghachi omume ngwa ngwa iji dozie nsogbu ndị nwere ike ịkwatu ahịa.
Podium na-akpaghị aka na-enyere gị aka ibute ụzọ wee họrọ saịtị nyocha ndị metụtara ahịa gị. Site na Google na Facebook gaa ụlọ ọrụ nyocha akọwapụtara nke ụlọ ọrụ, Podium's SmartSelect teknụzụ nwere ike inyere ndị ahịa gị aka rụọ ọrụ nke ọma na saịtị ndị nwere nnukwu mmetụta na azụmaahịa gị.
Podium na-enyere ndị azụmahịa aka:
Na-anakọta ọtụtụ narị nyocha na-etolite ndị ahịa gị site na ngwaọrụ mkpanaka ha.
Jikwaa, kọọ na, ma zaghachi nyocha gị niile dị n'ịntanetị.
Hụ ihe omimi nchịkọta na nyocha sitere na saịtị nyocha 20 dị iche iche.
Nweta ezigbo oge mata mgbe nyocha ọhụụ ga-adị ndụ.
Buru n'uche na ọ bụghị naanị na ọ na-emetụta nyocha, ọkwa na-egosipụta nke ọma na nsonaazụ ọchụchọ yana ọrụ nwere ike imetụta ọhụụ ọchụchọ mpaghara gị. Ọ bụrụ na ịnọ na ụlọ ọrụ ebe a na-eji ogo na nyocha eme ihe, ị ga-enwerịrị ikpo okwu dị ka Podium iji jikwaa aha gị na ijide onwe gị nke ọma.
Lelee Podium nke 2 Nkeji
Tags: jide nyochanyocha facebooknyocha googleJoel commjikwaa nyochanyochaa nyochanchịkọta nyocha na ntanetịnyocha nyocha nke ntanetiNyocha banyere ntanetịikpo okwuikpo okwu smartselectNtụlenjikwa ahanyochaa nyochaatụmatụ SEOseo nyochantụle kpakpando